Microstation Juquraafi: Buugga Tilmaamaha - Geofumadas
Luulyo, 2010 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Ka faa'iideysiga fiidkii saqda dhexe, sida ufiirso saaxiibada hurdo la'aanta. Inkastoo, sida macallinka weyni uu sheegay ...
... taas oo ku taala readme.txt
Sababta oo ah buugga sifo
Tani waa calaamad aad u weyn oo ah Geographics, laakiin weli waxaa loo isticmaalaa mashaariicda aan rabin in ay u haajiraan iyo in qaar ka mid ah ay ku sii socdaan Bentley Map, oo ku salaysan a qaab dhismeedka ee mashruuca ay lakabka leeyihiin laba heer oo urur:
Heerka koowaad ee loo yaqaan qaybta, sida Altimetry, Planimetry, Isticmaalka dhulka, Cadastar, Maamul, Khatarta iyo Dayac-tirka, Mawduuca, iwm.
Heerka labaad ayaa loo yaqaan sifooyinka (sifooyinka), tani waa layliyada macluumaadka la ururiyo. Sidaa daraadeed lakabyada dabiiciga ah ayaa geli kara dhulka, dhismayaasha, meelaha, qaybaha, iwm.
Heerka Bentley Map waxaa jira horeba subfeatures iyo xidhiidhada la xidhiidha si toos ah, laakiin taasi waa liis kale.
Dhammaan tani waa qayb ka mid ah a mashruuc, kaas oo Khariidadda Bentley hadda soo waco Juquraafi ahaan dhaxaltooyada ah. Mawduucan wuxuu ahaa - wali waa - waa mid aad u macquul ah, maxaa yeelay marka barnaamijyada barnaamijyada sida maadada, daabacaadda webka, isku xirka xogta ama maareynta koontaroolka ayaa fududeeyay xaqiiqada ah in uu awood u leeyahay in uu ka shaqeeyo heer aqoonsi oo leh sifooyinka iyo qaybaha.
Maxaa dhacaya waa qaybtan ka mid ah juqraafiintu waa lagama maarmaan in la ogaado illaa aad ka shaqeyneysid mashruuc jira. Haddii aad u muujisid qof isticmaalaya maalinta ugu horeysa ee dugsiga waxaad aadi doontaa rajo la'aan sababtoo ah ma helaysid dareen macquul ah isticmaalka gaaban oo aad xitaa u maleyneyso in ay adagtahay markaad maqasho gaabinta sida ucf, idx, meherad, mslink, dhawaanshaha, msgeo, iyo kuwo kale.
Sida loo abuuro buugga sifo
Waa ku haboon tahay in lagu qeexo feylka Excel ugu yaraan magacyada qaybaha iyo sifooyinka aan rajeyneyno in mid kasta oo ka mid ah. Qalabka gaarka ah ee mid kasta oo ka mid ah astaamahani wax macno ah ma laha in la dhigo laakinse halkii khariidad ah oo aan ku celineyno oo aan laheyn muuqaal la aqbali karo ama calaamad caadi ah.
Si aad u hesho buugga sifo, waxaa la sameeyaa Mashruuca / dejinta. Ka dibna waxaan furanaa mashruuc aan ku qorayno user iyo link directory.
Ka dibna waan dooran Miisaska / Qodobka Muhiimka ah. Sidaan waxaan haysanaa guddi aad adigu abuuri karto qaybaha, qeexaan sifooyinka, calaamadaha, miiska ay ku xiran yihiin iyo xitaa amarro la xidhiidha sifooyinka.
Qeybaha kor ku xusan waxay ku baxaan qiimo yar si ay u fahmaan maalinta koowaad ee aan adrenaline oo wanaagsan, laakiin wax badan ama ka yar amarku waa tan:
Si aad u abuurto qayb: Waxaad ku qortaa magaca qaybta, ku qor qaabka dheeraynta, faylka index, ka dibna badhanka insertiyo Guddiga si loo kaydiyo xogta.
Si aad u bedesho qaybta: Qeybta ayaa la taabtay, isbedelka ayaa la sameeyey, ka dibna badhanka Updateiyo Guddiga si loo badbaadiyo.
In la abuuro muuqaalada: qaybta taabashada, qor code, qor magaca, qor qoraalada, ka dibna badhanka ciyaarta, taabto shayga khariidada oo leh dabeecadaha, ka dibna insertka dibna Guddiga si loo badbaadiyo.
Si aad wax uga beddesho: taabashada qaybta, taabashada muuqaalka, wax ka bedel guryaha, badhanka Updateiyo Guddiga si loo badbaadiyo.
Sidan oo kale, qaybaha iyo sifooyinka waxaa la abuuraa, taas oo markaa dib loo cusbooneysiiyo miiska muuqaalada, ee mashruuca, u noqo Oracle, SQL ama Access.
Sida loo xareeyo sifooyinka
Si loo awoodo in loo xilsaaro sifooyinka shay ama dhismaha dusheeda oo leh sifo gaar ah ayaa lagu sameeyaa iyadoo loo marayo Qalabka / Maaraynta Muuqaalka. Halkan waxaan dooranaynaa qaybta iyo sifooyinka, tan waxaa loo yaqaan Muuqaal firfircoon.
Ka dib si aad u xilsaarisid, ka saarto, ama la tasho sifaha sheyga wuxuu isticmaalaa qalabka Nidaamka, haddii aysan ahayn mid firfircoon waxaa la sameeyaa Qalabka / Juquraafi / Qaababka Badhanka koowaad waxaa loo isticmaalaa in lagu doorto sifo ka timi shey hore u leh, kuwan soo socda si loo magacaabo (ku lifaaq) ama ka saar (kala tag).
Badhanka afraad ayaa ah dib u bilow muuqaalka firfircoon iyo ugu dambeyntii waa in lala tashado sifooyinka sheyga ku yaal khariidada.
Sida loo muujiyo sifooyinka
Saaxiibka tani waa midkii hore loo xushay sifooyinka, qalabka Xayeysiin / Sawir Maamuluhu wuxuu kuu ogolaanayaa inaad joojiso ama aad u jeediso waxyaabo gaar ah. Sababtoo ah waxay ku hawlgalaan liiska hubi, waxaa loo isticmaalaa Codso oo cusbooneysiiya si loo casriyeeyo bandhigga shaashadda.
Tani ma aha mid la mid ah shay heerkulbeeg ah, midab iyo nooc xariiq ah; waa hanti la geliyo iyada oo aan loo eegin heerka ama midabka walxaha, ayaa ku tusi doona sida uu leeyahay Buug cajalad. Si looga fogaado sifooyinka, sheyga ayaa la wadaagi kara sifooyinka, sida kiiska xuduudaha tufaaxa, taas oo ah xuddunta hantida, waxay kudhacdaa xuduudda aagga iyo xuduudaha wareegga magaalo. Mudnaansiinta waxaa lagu qeexay hantida loo yaqaan called Amar bandhig y mudnaanta.
Si khiyaameeyaan mashruuc leh xog ururin hore loo soo ururiyey, waxaa loo sameeyaa sidii aan sharaxay wakhtigii hore.
Post Previous«Previous Miyuu qiimeynayaa haysashada blog?
Post Next Sida loo soo dejiyo faylka dgn / dwgNext »